Ihe nkiri 12 iji nwee obi ụtọ n'oge ọkọchị a | Akụkọ akụrụngwa
Ihe nkiri 12 iji kporie ndụ n'oge ọkọchị a
Villamandos | | Ihe nkiri na usoro, General
Oge ọkọchị eruola, maka ọtụtụ ihe n'ehihie n'ehihie, na n'ehihie ndị ahụ nke okpomọkụ na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịpụ n'èzí ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ anaghị akwado ya, ọ dịghị atụmatụ dị mma karịa ikiri ihe nkiri n'ime ime ụlọ ulo. O nwekwara ike ịbụ ezigbo echiche ịga ihe nkiri iji hụ otu ọhụụ ọhụrụ. Maka ihe a niile taa anyị chọrọ gwa Abigel 12 fim na-enwe n'oge okpomọkụ na-enwe ezigbo oge.
N'ime ihe nkiri iri na abụọ ndị a, enwere ụdị dị iche iche ma anyị nwere ike ịchị ọchị nke ukwuu, kamakwa tie mkpu na ọbụna tie mkpu na ụjọ. N'ezie nke a bụ ndepụta anyị, mana anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị gwa anyị na anyị ekwesịghị ịhapụ ọtụtụ ihe nkiri n'oge ọkọchị a. N'ezie, maka ndekọ na anyị na-enye gị ndepụta nke ihe nkiri, ebe ị ga-ahụ ha na otu esi ahụ ha dịịrị gị, ọ bụ ezie na enwere m olileanya na ị gaghị echezọ popcorn na ma ọ bụ mmanya dị nro ma ọ bụ ezigbo biya biya.
1 Ndị Minions
2 Gru, ọkacha mmasị m villain
10 Zọ Mbibi
11 Nwa nwanne nne
12 Igbuo Bill
Otu n'ime ihe nkiri kachasị atụ anya n'oge ndị a bụ Mininios, ụmụ obere ndị ahụ na-acha edo edo na-ekwu okwu enweghị nghọta na naanị ebumnuche ha bụ ijere nna ukwu ọjọọ kachasị.. N'agbanyeghị ịbụ ihe nkiri eserese, ọ nwere ike ịme mmadụ ọ bụla ọchị ọchị yana ọ nwere ike ịbụ ihe nkiri zuru oke iji nọrọ n'ehihie na-atọ ụtọ na sinima.
Otu ndụmọdụ dị mkpa bụ ka ị ghara ịnwa ịghọta ndị ọrụ, n'ihi na mgbe ahụ ị ga-atụfu eri niile nke ihe nkiri ahụ, na-anwa ịghọta ihe Kevin ma ọ bụ Stuart kwuru.
Gru, ọkacha mmasị m villain
Ndị Minions abụghị mkpụrụ edemede dị na fim dịka nke a na-ewepụta ụbọchị ndị a na ihe nkiri gburugburu ụwa, nke ahụ bụ Ha mere izizi ha na Despicable Me Gru, ihe omumu ohuru ohuru nke umuaka gi ghachi ochi n’ekwusi, i nwediri ike ichi ochi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga n’ihu n’ọchị ahụ, ị ​​ga - ahụ akụkụ nke abụọ nke ihe nkiri a.
Njikere ịbụ onye ọjọọ ọjọọ kachasị na mbara igwe?
Agbanyeghị na agaghị ahapụ pixels na ụlọ ihe nkiri ruo mgbe ọnwa Julaị na-esote ụbọchị 24 na ihe nkiri, anyị nwere ike ịhụrịrị ụlọ ọrụ gọọmentị na-adọkpụ n'oge niile na mkpọsa ahịa telivishọn.
Ihe nkiri ahụ, ewezuga ịbụ nnukwu geekỌ naghị adị njọ. Ka anyị gụọ akụkụ nke nkọwapụta ọrụ ya; «N’afọ 1982, NASA zigara capsule n’ime mbara igwe n’olileanya nke ịkpọtụrụ ụdị ndụ ndị ọzọ. Ọ gụnyere ihe atụ sitere na ndụ na ọdịbendị anyị. Ezubere ya ịbụ ozi nke udo, mana enwere nghọtahie ... Fọdụ ndị ọbịa Ha ezigala egwuregwu vidio n'ezie ịwakpo anyị".
Onwere onye nwere obi abụọ na anyị kwesịrị ịhụ ya n'oge ọkọchị a na fim?
A n'oge okpomọkụ na-enweghị na-ekpori ndụ a nkiri, ọ bụghị ikwu a masterpiece, nke Clint Eastwood ọ bụghị oge ọkọchị. Maka ndepụta a anyị họọrọ Gran Torino, ọ bụ ezie na ihe nkiri ọ bụla site na onye omee akụkọ akụkọ a ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ ma nwee oge obi ụtọ n'oge okpomọkụ a.
Njikere maka ọgwụ nke Eastwood kachasị mma?. N'ezie, anwala i tryomi ya n'ihi na ọ bụ onye a na-apụghị izere ezere, ọ pụkwara ịkpatara gị ajọ ihe.
Ihe nkiri a na-emenye ụjọ ebe omee Spanish Macarena Gómez na-arụ ọrụ macabreO nwere ike ịbụ otu n'ime ihe nkiri kachasị egwu kachasị egwu iji kụọ ihe nkiri n'oge ndị a. Ugbu a ọ dị maka ịhụ ya n'ụlọ, nke dị jụụ na sofa, ọ ga-abụrịrị otu n'ime ihe nkiri dị mkpa n'oge ọkọchị a.
N'ezie, tupu ịmalite onwe gị ka ị hụ ya, ị kwesịrị ịmara na enwere ọbara ebe niile na ezigbo akara ngosi nke ihe na-adịghị mma maka afọ niile adịghị mma na nke nwere ike gbanwee afọ onye ọ bụla. Ọbụlagodi oge ọkọchị, buru obere blanket na oge ọ bụla ihe jọrọ njọ, kpuchie anya anaghị ahụ ...
E nweghị zuru okpomọkụ ma ọ bụrụ na a oké film kpochapụwo na anyị kpebiri na-agụnye Casablanca, ihe nkiri akụkọ ntụrụndụ bụ Humphrey Bogart na Ingrid Bergman na anyị niile ahụgoro n'ọtụtụ oge ugbua, mana na ọ gaghị adị oke ịhụ ọzọ ịnụ ụtọ ya. Know mara, oge ọkọchị a kpọọ ya otu oge ma wepụ ya na igbe ya iji tinye ya na DVD ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị hụla Casablanca ọtụtụ oge, ị nwere ike dochie ya na nnukwu kpochapụwo nke ihe niile dị ụtọ.
N'agbanyeghị okpomọkụ nke na-eme ụbọchị ndị a otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ na cinema na ikiri ihe atụ Saint Andrew, ebe Dwayne Johnson Ọ ga-enye anyị nnukwu usoro iji rụọ ọrụ na nsonaazụ pụrụ iche, oge ụfọdụ ọ naghị adịkarị nkwenye.
N'ime ihe nkiri a, Johnson na-egwuri egwu onye helikọpta nnapụta nnapụta nwere nnukwu nsogbu na ndụ ya, nke agbakwunyere nnukwu ala ọma jijiji na-enweghị ihe ọ bụla na-erughị ogo 9 na mmebi San Andreas.
Ihe a o kwere nkwa ọ bụ eziokwu?.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime fim kachasị atụ anya na 2015 a ma ọ dịlarị na bọọdụ mkpọtụ gburugburu ụwa Jurassic World. Na ihe nkiri a anyị ga-ahụ ọtụtụ dinosaurs na dịka o mere na Jurassic Park ọrụ ahụ anaghị aga dịka a tụrụ anya ya O kwusiri na nkpagbu nke gha eme ka anyi rapara na oche sinima. Luckily ị gaghị agba ọsọ ịzọpụta onwe gị, agbanyeghị na amaghị m ma ị ga-eri oke popcorn.
Ọ bụrụ na ị hụbeghị ihe nkiri mbụ ahụ, echegbula onwe gị, ọ dịghị mkpa ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ido onwe gị n'ụzọ zuru oke ma nwee ọhụụ ọhụụ a n'enweghị nsogbu.
N'oge okpomọkụ bụ ịchị ọchị na-enwe na Ted, nke ahụ dị egwu ma dị egwu na-agbasi ike, nwere ike ịbụ àgwà zuru oke maka gị ịchị ọchị ruo mgbe ị na-ebe ákwá. O gosila anyị ihe ọ nwere ike na nke mbụ n'ime fim ya na ọ dị ka na nke abụọ a ọ dị njikere imeri ya.
A tụbara anyị na ọchị na ọchị na nke mbụ n'ihe nkiri Ted, mana ọ bụrụ na ịchọtaghị ihu ọchị ma ọ bụ na ị hụrụ na ọ na-asọ oyi, ọ nwere ike bụrụ echiche ka mma ịhọrọ fim ọzọ na ndepụta ahụ. Ted na nke abụọ a abanye na-aga n'ihu na akara nke mbụ ma ọ bụ karịa njọ. Dọrọ gị aka ná ntị.
Ọ bụrụ na ọkọchị na-enweghị Clint Eastwood ihe nkiri abụghị oge ọkọchị, onye ọzọ na-enweghị ịhụ Paul nwaanyi, site na swagger ya, ọ gaghị abụ ezigbo ọkọchị ma. Okporo ụzọ na-ala n'iyi bụ otu n'ime fim ikpeazụ nke nnukwu onye omee ahụ sonyere ma ọ bụrụ na ị kwe ka m nwee ike ịgwa gị na ọ bụ otu n'ime ihe nkiri kachasị amasị m. Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, enwere m ike ịkwado ya..
Paul Newman ị dịla njikere ịga ụzọ mbibi gị n'aka Paul Newman?
Nwa nwanne nne
En los últimos tiempos Ihe nkiri ndị na-eme egwuregwu na Spanish emeela ka osisi na Primos bụrụ otu n'ime ndị ọ na-enweghị onye kwesịrị ịkwụsị ikiri, oge ọkọchị a, n'oge oyi ma ọ bụ n'afọ ọzọỌ bụ ezie na ndụmọdụ anyị bụ na ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, ị ga-anọdụ ala ụbọchị ọ bụla n'oge ọkọchị a iji hụ gị ma chịa ọchị na-enweghị ịkwụsị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa dị mkpirikpi nke ihe nkiri a, n'ihi na ịbụ Spanish ị na-enwe obi abụọ (ihe dị mma), ị ga-amararịrị na agbahapụla nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ ụbọchị 5 tupu agbamakwụkwọ ya, mana ọ kpebiri ịbịa n'ụlọ ụka ma ọ bụrụ na nwanyị ahụ na-akwa ụta mechara. bido na njem na-adịghị agwụ agwụ.
Iji mechie ndepụta a enweghị m ike iguzogide itinye ebe a quentin tarantino ihe nkiri. M kpọmkwem họọrọ Igbuo Bill nke bụ n'ezie ihe kasị mma ọbara director fim, ma ọ nwere ike ịbụ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla uto, ọ bụ ezie na m na-ama aka ná ntị gị na anyị na-aga ịhụ ọbara n'ebe nile.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e kewara ya n'akụkụ abụọ na nnukwu ihuenyo, ọ bụ otu ihe nkiri nwere ogologo oge karịa 4 awa. Nwere ike ịmalite site na ịlele akụkụ nke mbụ, wee mechaa nke abụọ ma ọ bụrụ na ịrahụghị ụra wee orednọ nkịtị gwụrụ gị ike, nke nwere ike izu oke.
¿Njikere ịbanye n'ime uwe na-acha odo odo ma bụrụ ihe kacha nso Uma Thurman ị hụtụrụla?.
Ndị a bụ ndụmọdụ anyị 12 maka ndị na-ekiri ihe nkiri n'oge ọkọchị a ma ugbu a, anyị nwere olile anya na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe nkiri anyị chọrọ, mana agaghị m achọ na ugbu a, ị bụ ndị na-akwado anyị ụfọdụ, n'agbanyeghị ụdị, nke mere na anyị nwere ike ịgbasa ndepụta a. Ọ ga-ejekwara ndị hụlarịrị ọtụtụ fim na ndepụta a nwere ike ịga n'ihu na-ahụ karịa ma nwee oge ọkọchị.
You nwere ike izipu anyị ndepụta nke ihe nkiri maka oge ọkọchị a site na oghere edebere maka ikwu na ị ga-ahụ obere n'okpuru ma ọ bụ site na otu n'ime netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Ihe nkiri 12 iji kporie ndụ n'oge ọkọchị a
Ebumnuche Aha ojii: Chọta aha njirimara ziri ezi maka Netwọk mmekọrịta anyị
LG G4, nhọrọ na-adọrọ mmasị n'ime oke dị elu